Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > 5 Tụrụ Of Interest Ị na-amaghị Na South Africa
South Africa bụ ala obi ụtọ, di iche iche, ma ọgaranya omenala uru. Ọ na-eme atụmatụ na nso 17 nde ọbịa gaa South Africa afọ gara aga naanị, na nke a bụ a ọnụ ọgụgụ nke ga-abụ na ọtụtụ na-eto eto nke afọ a. Ọ bụ ebe a na-ebe ndị mara mma, mkpa n'akụkọ ihe mere eme, ebube nri, na ihe n'ụba nke ihe na-ahụ ma na-eme dị ka a njem nleta.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịga nke a ịrịba obodo, eleghị anya ị chọrọ ịmata ihe e nwere ime. E nwere ibu nke ihe na so na-enwe ndị kasị mma ahụmahụ, karịsịa dị ka e nwere ọtụtụ-ekwo ekwo njem nleta na-adọrọ mmasị, mana ọ dị mma mgbe ụfọdụ pụọ na kụrụ aka soro ntakịrị. Ndị a na-ise nke ndị kasị akpali tụrụ na South Africa na ị nwere ike ịbụ na ọ maara na.
Pretoria bụ a pụrụ iche, underrated obodo na South Africa si Gauteng ógbè. E nwere ọtụtụ inyocha ebe a, dị ka otu ụlọ, Church Square, na Pretoria Ogige.
Sun City Resort a maara dị ka Alaeze Ụtọ regionally na e nwere ike ruru na a abụọ-hour mbanye si Joburg. Okomoko a amalite na cha cha bụ zuru okè n'ebe onye ọ bụla onye na-achọ a bit nke na-achụ akụnụba na ha South African njem. E nwere ụfọdụ ndị mara mma hotels ebe a, nakwa dị ka abụọ award-emeri golf ọmụmụ, na a 7,000-ike agụ iyi nsọ.
Biko gaa na anyị na Saveatrain.com ma ọ bụrụ na ị mkpa gbaa ụgbọ okporo ígwè.
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-spots-of-interest-you-may-not-know-about-in-south-africa%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#South Africa ezumike Travel
Ivy na-aga na ụmụnne ya ndị nwoke na maa ụlọikwuu na azu tours n'oge ngwụsị izu. Nke a malitere ya ahuhu n'ihi na izu ụka njem. Ọ ugbu a ọ gụchara nna ya ukwu n'ókè na oke ohia na Environmental ọmụmụ na ọrụ dị ka a akụkụ-oge ejechi akwụkwọ edemede ole na ole njem na pro-na gburugburu ebe obibi weebụsaịtị. Ọ na-a ka a ole na ole European na Asian mba na ọ na atụmatụ ịgagharị gburugburu North America ozugbo na ọ na-eme na ya ọmụmụ. - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m